Horudhaca yar ee isdhexgalka ee CAD - Kharashka - Geofumed
Horumarinta Yar ee Qalabixinta CAD - Qiimaha
Febraayo, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Engineering, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Ka dib dhimashada SAICIC, barnaamijyo badan oo reer Mexico ah, oo u qoondeeyay suuqan, oo ka mid ah qaybaha injineernimada ee markii ugu horreeyay ee is-gaadhsiiyay. Waxaan xusuustaa in mararka qaarkood aan bixiyo kharashka, waxaana lagama maarmaan ahayd in la tijaabiyo arjiyada kala duwan (oo laga helo maalmahaas), sida Newwall, Opus, Champion iyo Neodata. Xaqiiqdii waxay u muuqatay mid ka fiican, laakiin waxay igu mashquulisay inaanan awoodin inaan u qaybiyo waddankayga, sababtoo ah waxay u baahan tahay todobaadkii Mexico. Marka laga reebo lacag la'aanta, waxay u muuqatay wax aan caqli ahayn in ay bartaan isticmaalka barnaamij kaas oo aan hore u ogaanay sida loo isticmaalo. Wixii Opus iigu yeeray ayaa i soo wacay, dhawaanahan waxa ay ka dhigeysaa qeylo ku filan AdWords si ay iigu dhigto inaan dib u eego maalin kasta kuwan ...
Hadda, bilaash ayaan dib u eegeynaa sheekadii hore, fiicnaanta barnaamijyadani ay sameeyeen iyo sababta ay u kharashgareeynayaan isbeddelka ay la leeyihiin CAD-da.
shirkadda dhismaha A, taas oo ka saaraysaa waraaqaha ka mid curdan ah oo ah dabaq 8 dhismaha iyo leedahay laba todobaad si loo qorsheeyo soo jeedinta, qarashgareyn karaan saddex injineerada si ay u xisaabiso inta ku taal buugayga, qeexo kharashka unit tabs ee Excel, qiyaas kharashyada kharashka badan iyo qiyaasta qadarin leh. Laakiin haddii dalab hal mar soo gudbiyey waxaa loo ogol yahay hal maalin si ay dib ugu soo jeedinta cusub, waxaa hubaal lahaa dhibaatooyin halis ah si ay u tagaan si cadaalad ah oo aan riyo ku saabsan goolasha ay tahay qalad.
Tani, barnaamijyada sida kuwa kor ku xusan, dhammaan carruurta SAICIC waxay sameeya sameeyaan, abuuraan qaabab xogeed oo laga helo wax soo-saarka:
Kadibna, waxay diyaar u yihiin dhisidda kaararka qarashka ee aasaasiga ah (asaasiga ah), oo markaa la isku daro waxyaabo wax dhisma ah (Midaysan), kuwani waxay ku jiraan kooxo miisaaniyadeed (Ciyaaraha), ugu danbeynna waafaqsan yahay baahida dhaqaalaha (Cutubyada). Fikraddaasi Matrix-ka la muujiyay waxay la mid tahay sida dhammaanteedba la fuliyay, hal tallaabo kor u qaadaya geedka Mashaariicda, Waxaa intaa dheer, waxay ku haboontahay baahida sii kordheysa sida qeexidda aagagga dhaqaalaha iyo shuruudaha kala duwan ee arrimaha kharashka badan ee waddanka ku kala duwana laakiin loo beddelay (in ka badan).
Waxaan xasuustaa sidan ku sameeya Lotus 123, way dhimatay, laakiin aad ayaan u baranayey in aan fahmo qulqulaha qaarada, iwm, sabirkayga.
Sida talaabo ee soo socota, barnaamijyada isku dhafan ah iyadana in kharashka aasaasiga ah unit module, qiyaasaha maaraynta dib u soo kabashada ka dib markii dhismaha bilaabay, module ah markii qorsheyneysa la Jidka muhiim ah, kontaroolka alaabada iyo qaar ka mid ah modules dheeraad ah oo maamulka dhaqaale - maamul
Horumarka ugu wanaagsan ee lagu tixgelin karo is dhexgalka garaafka, inkastoo ay ahayd mid asal ah, waxaan sheegi karnaa laba arji oo Neodata sameeyey:
Xisaabinta tirooyinka firfircoon
Inkasta oo foomka uu yahay mid gaaban oo macquul ah, waxaa loo tixgelin karaa fikradda wanaagsan ee Bim (Xogta Dhismaha Dhismaha) oo dhawaanahan noqonaya mid la yaab leh. Macaashka ugu fiican waa in miisaaniyadda lagu hayn karo "semi-dynamic", sida marka la beddelo qorshayaasha, isbeddelka miisaaniyadda la soo saaro haddii kani yahay kiis. Waxaa kale oo wanaagsan in la dalbado qaybo birta ah oo dhakhso ah ama waqti dambe uu noqon doono madax xanuujiye macmiilaha iyo qandaraaslaha biraha dhismaha.
Mawaadiicda ayadoo loo eegayo sifooyinka
Mid ka mid ah unugyada la yiraahdo "commercial housingization", Neodata wuxuu isku xiraa GIS asal ah, halkaas oo aad ku ridi karto farsamooyinka sida waafaqsan iibsashada ama mushahar dhaqaale.
Waxaan jeclaan lahaa in aan sheego wax badan, laakiin ma jiraan wax badan oo la arko, maaha inaysan jirin, laakiin adeegsigeedu wuxuu noqday mid caan ah. Raadinta sabab sababta arrintu u socoto aysan ahayn mid adag, ma ahan dhammaadka SIG ee khariidadaha rinjika ah iyo furitaankiisa saxda ah ee CAD. Sidoo kale ma diidi karno in ay tahay baahi weyn, oo leh suuqyo badan CAD / CAM iyo barnaamijyada kharashka gaarka ah ee AEC.
Raadinta sabab, waxaan gudbin karaan oo kaliya in ay waxa in aan firaaqada Capuchino ayaa ogaan leh sigaarka in C #, waxaan soo xusuusan waxaan leenahay ka badan hal mar ka tagay on guddiga mashruuc aragti duurka this. Iyadoo IntelliCAD iyo DataCAD ayaa isku dayay, oo waxaannu ku dhamaaday taasoo nala noqotay in dhibaatadu tahay jiritaanka of horumar la'aan kordhay isticmaalka caadiga ah dulinka (lacag badan oo ay gaaban). Inkasta oo dad badani aqoonsadaan dgn sida xooggan, dwgku waa mid aad uwanaagsan, dxf waa jinni oo qof kastoo guursanaya danta is-dhaafsiga diiniga ah.
Haddii this badala, riyadan sii joogi doonaa qarow ah oo ka dhacay Quantity duushay, kuwaas oo inkastoo ay sida jirka ah sida Eagle Point iyo in gacmaha AutoDesk, waa kaliya la heli karo si United States. Waxaa la yaab leh in hawlaha qaar ka mid ah macaamiishu ay ku dhex jiraan 3D, laakiin waxaynu aragnay hirgal aad u yar.
Waxaan rajeyneynaa in isku-darka shuruudda Bim ee hadda la yimaado GIS iyo shaqo isku dhafan of AutoDesk - Bentley waxay ku siin kartaa xasilooni dheeraad ah heerarka; Tani waa inay dhiirigelisaa horumarinta codsiyada wanaagsan ee aaggan ... sii waaraya.
AutoDesk Bentley Systems 3D Dgn Dwg
Post Previous«Previous Tilmaamaha Magazine ee hadda ku qoran Isbaanish
Post Next Khariidadda magacaaga dambeNext »
3 Jawaab ah "Horumarka yar ee isdhexgalka ee CAD - Qiimaha"
Neodata waxaa ku jira barnaamijyo taxane ah oo loogu talagalay injineernimada dhismaha. Kharashaadka qaybta, xakameynta mushaharka (mushaharka), qiyaasaha, horumarka guryaha, alaabada, iwm.
Macluumaadka dhameystiran iyo qaababka demo waxaa laga soo daabici karaa bogga Neodata.
KIKA LOPEZ PEREZ isagu wuxuu leeyahay:
OK ME MACLUUMAADKAAGA XUN muuqataa porfis Council City Brisbane DAMIYO WAX KU SAABSAN WAXA AY UTAAGANTAHAY, SIDA LOO ISTICMAALO IYO WAXA BARNAAMIJKA THIS GURIGAAGA shaashadda oo inta badan in ay u adeegaan
Dhulku ku heshiin, qaabka .dwg iyo caddaymaha la beddelo iyada oo aan furan kasta oo cusub version-waa kala jejebiyey a on hal-abuurnimo iyo horumarinta barnaamijyada design graphic.
Sida ku dhacay xafiiska, waxaan rajaynayaa in dawladdu u baahan qaabab furan iyo antitrust.